သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ – Askstyle
သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ
တစ်နေ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနေသော အမတစ်ယောက်မှ … …မောင်လေးစိုင်းမင်းသန့်မင်းကတိုင်းရင်းဆေးနည်းတွေတင်နေတာမို့ အမတို့မိသားစု လက်တွေ့ဆေးနည်းလေးပြောပြပါ့မယ် …ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ အများအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့အမ ကုသိုလ်ရတာမို့ ပြောပြပါခင်ဗျာ … အမရဲ့ အဖေက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြစ်နေတာပါ အမက ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်တယ် ။
အာ့နဲ့ ပင်စိမ်းပင်နဲ့ရောဂါ ( 40 ) ဖတ်မိပြီး ပင်စိမ်းပင် ကလည်း အရံသင့်ရှိတာနဲ့ လက်တွေ့ဆေးအဖြစ်အသုံးပြု လိုက်တာ ! ပုံထဲကအတိုင်းပဲ အမရဲ့ အဖေရောဂါစဖြစ်တော့ အသက် ၆၇ – ၆၈အရွယ် လူကပိန်ပြီး ရင်ဘတ်ကအောင့် လူကနည်းနည်းလှုပ်လည်းမောတယ် ။ပင်စိမ်းပင်ဆေးသုံးစွဲပြီး နှစ်လအကြာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ အရင်လို ရင်ဘတ်အောင့်တာ မောတာတွေ မရှိတော့ဘူး ! စားကောင်းအိပ်ကောင်းနဲ့မြင်တဲ့အတိုင်း ကျန်းမာဝဖြိုးလာတာလက်တွေ့ပါ ။
အမလည်း အဖေ့လိုပဲ ပင်စိမ်းကို ဆေးအဖြစ်သုံးလိုက် တာ ပန်းနာရင်ကျပ် သက်သာခဲ့တယ် အရင်လို အင်္ဂလိပ်ဆေးဝါးတွေ မသုံးစွဲရတော့ဖူး လူလည်းအတော်နေလို့ကောင်းလာတယ် ။အဲ့ဒါကြောင့် ငါ့မောင်က တိုင်းရင်းဆေးတွေမျှဝေနေတော့ အများအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ဆေးနည်းပါ အမတို့လက်တွေ့ သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့တာပါ ။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနဲ့ပန်းနာရင်ကျပ်အတွက် ဆေးနည်းကတော့ မခက်ပါဖူး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သေခြာလေး လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါပဲ ။
ပင်စိမ်းပင် လက်တစုပ်ကို ရေသန့်စင်အောင် သေခြာဆေးပါ ။ထို့နောက် ပင်စိမ်းရွက်သတ္တုရည်အကြမ်းပန်ကန်လုံးတစ်ဝက်ရအောင်ထောင်းပြီညှစ်ယူပါ ။ပြီးရင် ရလာတဲ့ ပင်စိမ်းသတ္တုရည် အကြမ်းပုဂံ တလုံးခန့်ကို ပျားရည် ဟင်းစားဇွန်းတဇွန်းခန့် ထည့်ပြီးသောက်ပေးပါ ။(သွေးတိုးမရှိလျှင်)ဆားအနည်းငယ်ခပ်သောက်ပါ )ဆေးထောင်းတဲ့အခါကျောက်ပျဉ်/ ကျောက်ငြုပ်ဆုံထဲထည့်မထောင်းပါနဲ့ကျောက်မှုန့်တွေပါတတ်လို့ပါ ။အမကတော့ သစ်သားစင်းတီးတုံး နဲ့အရိုးအရွက်တွေကိုထောင်းပီးအရည်ညှစ်ယူပါတယ် အရိုးအရွက်အကုန်ထောင်းပါ ။ဒန်သတ္တုငြုပ်ဆုံထဲလည်းထည့်ထောင်းရင်အဆင်ပြေပါတယ် ။
ဆေးသောက်ပီး၂နာရီလောက်ဆို ရင်ခေါင်း ဝမ်းခေါင်းပူလာတတ်ပါတယ် အစာတစ်ခုခုစားလိုက်ပါ စားပီးရေအဝသောက်ပါ ။သောက်စ (၁) ရက်(၂) ရက် ဝမ်းချုပ်သလိုဖြစ်မယ် ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဖူး ရေသာများများသောက်ပေးပါ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါမယ် ။အမရောဂါစဖြစ်ကာစ အသက်ရှူရင် လေသံကတရွှီးရွှီးနဲ့နေ့ရောညပါ အိပ်မရဖူး အဖေနဲ့အတူတူ ပင်စိမ်းသတ္တုရည်ကိုသောက်လိုက်တော့ !ချက်ခြင်း တရွှီးရွှီးလေသံတွေပျောက်သွားပြီး နေကောင်းလာတယ် ပထမတရက်တော့သောက်စမို့လားသိဘူး ပိုကျပ်တာနဲ့ ဆားအနည်းငယ် ထည့်သောက်ပါတယ် ။
အဖေဆို ဖြစ်စက မရတော့ဘူးထင်တာသူများတွေအေးခဲစောင်ခြုံနေချိန် အဖေကချွေးစေးတွေပြန်အသက်ရူ ကြပ်ပြီး မရတော့ဘူးလို့တောင်ထင်တာပါ ။အခုတော့ ပင်စိမ်းသတ္တုရည် နဲ့ ပျားရည်း အစွမ်းကြောင့် အဖေ့နှလုံးရောဂါနဲ့ အမရဲ့ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါ လက်တွေ့ဆေးနည်းလေးမို့ စိုင်းမင်းသန့်ကို ပြောပြတာပါ ။အဓိက အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဆေးကိုပုံမှန်သောက်ပေးဖို့ ထပ်ပြောပါရစေနော် … …
ဆေးနည်းကိုပြောပြပေးသော အမ ရွှေခြံသူ မအိမ်ကံ ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ …
တဈနေ့ ခငျမငျရငျးနှီးနသေော အမတဈယောကျမှ … …မောငျလေးစိုငျးမငျးသနျ့မငျးကတိုငျးရငျးဆေးနညျးတှတေငျနတောမို့ အမတို့မိသားစု လကျတှဆေ့ေးနညျးလေးပွောပွပါ့မယျ …ဟုတျကဲ့ခငျဗြ အမြားအတှကျအကြိုးရှိတာပေါ့အမ ကုသိုလျရတာမို့ ပွောပွပါခငျဗြာ … အမရဲ့ အဖကေ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါဖွဈနတောပါ အမက ပနျးနာရငျကပျြရောဂါဖွဈတယျ ။
အာ့နဲ့ ပငျစိမျးပငျနဲ့ရောဂါ ( 40 ) ဖတျမိပွီး ပငျစိမျးပငျ ကလညျး အရံသငျ့ရှိတာနဲ့ လကျတှဆေ့ေးအဖွဈအသုံးပွု လိုကျတာ ! ပုံထဲကအတိုငျးပဲ အမရဲ့ အဖရေောဂါစဖွဈတော့ အသကျ ၆၇ – ၆၈အရှယျ လူကပိနျပွီး ရငျဘတျကအောငျ့ လူကနညျးနညျးလှုပျလညျးမောတယျ ။ပငျစိမျးပငျဆေးသုံးစှဲပွီး နှဈလအကွာ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါနဲ့ အရငျလို ရငျဘတျအောငျ့တာ မောတာတှေ မရှိတော့ဘူး ! စားကောငျးအိပျကောငျးနဲ့မွငျတဲ့အတိုငျး ကနျြးမာဝဖွိုးလာတာလကျတှပေ့ါ ။
အမလညျး အဖလေို့ပဲ ပငျစိမျးကို ဆေးအဖွဈသုံးလိုကျ တာ ပနျးနာရငျကပျြ သကျသာခဲ့တယျ အရငျလို အင်ျဂလိပျဆေးဝါးတှေ မသုံးစှဲရတော့ဖူး လူလညျးအတျောနလေို့ကောငျးလာတယျ ။အဲ့ဒါကွောငျ့ ငါ့မောငျက တိုငျးရငျးဆေးတှမြှေဝနေတေော့ အမြားအတှကျ အကြိုးရှိမယျ့ ဆေးနညျးပါ အမတို့လကျတှေ့ သကျသာပြောကျကငျးခဲ့တာပါ ။နှလုံးသှေးကွောကဉျြးနဲ့ပနျးနာရငျကပျြအတှကျ ဆေးနညျးကတော့ မခကျပါဖူး စိတျရှညျရှညျနဲ့သခွောလေး လုပျဆောငျပေးဖို့ပါပဲ ။
ပငျစိမျးပငျ လကျတစုပျကို ရသေနျ့စငျအောငျ သခွောဆေးပါ ။ထို့နောကျ ပငျစိမျးရှကျသတ်တုရညျအကွမျးပနျကနျလုံးတဈဝကျရအောငျထောငျးပွီညှဈယူပါ ။ပွီးရငျ ရလာတဲ့ ပငျစိမျးသတ်တုရညျ အကွမျးပုဂံ တလုံးခနျ့ကို ပြားရညျ ဟငျးစားဇှနျးတဇှနျးခနျ့ ထညျ့ပွီးသောကျပေးပါ ။(သှေးတိုးမရှိလြှငျ)ဆားအနညျးငယျခပျသောကျပါ )ဆေးထောငျးတဲ့အခါကြောကျပဉျြ/ ကြောကျငွုပျဆုံထဲထညျ့မထောငျးပါနဲ့ကြောကျမှုနျ့တှပေါတတျလို့ပါ ။အမကတော့ သဈသားစငျးတီးတုံး နဲ့အရိုးအရှကျတှကေိုထောငျးပီးအရညျညှဈယူပါတယျ အရိုးအရှကျအကုနျထောငျးပါ ။ဒနျသတ်တုငွုပျဆုံထဲလညျးထညျ့ထောငျးရငျအဆငျပွပေါတယျ ။
ဆေးသောကျပီး၂နာရီလောကျဆို ရငျခေါငျး ဝမျးခေါငျးပူလာတတျပါတယျ အစာတဈခုခုစားလိုကျပါ စားပီးရအေဝသောကျပါ ။သောကျစ (၁) ရကျ(၂) ရကျ ဝမျးခြုပျသလိုဖွဈမယျ ဘာမှကွောကျစရာမလိုပါဖူး ရသောမြားမြားသောကျပေးပါ ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားပါမယျ ။အမရောဂါစဖွဈကာစ အသကျရှူရငျ လသေံကတရှီးရှီးနဲ့နရေ့ောညပါ အိပျမရဖူး အဖနေဲ့အတူတူ ပငျစိမျးသတ်တုရညျကိုသောကျလိုကျတော့ !ခကျြခွငျး တရှီးရှီးလသေံတှပြေောကျသှားပွီး နကေောငျးလာတယျ ပထမတရကျတော့သောကျစမို့လားသိဘူး ပိုကပျြတာနဲ့ ဆားအနညျးငယျ ထညျ့သောကျပါတယျ ။
အဖဆေို ဖွဈစက မရတော့ဘူးထငျတာသူမြားတှအေေးခဲစောငျခွုံနခြေိနျ အဖကေခြှေးစေးတှပွေနျအသကျရူ ကွပျပွီး မရတော့ဘူးလို့တောငျထငျတာပါ ။အခုတော့ ပငျစိမျးသတ်တုရညျ နဲ့ ပြားရညျး အစှမျးကွောငျ့ အဖနှေ့လုံးရောဂါနဲ့ အမရဲ့ပနျးနာရငျကွပျ ရောဂါ လကျတှဆေ့ေးနညျးလေးမို့ စိုငျးမငျးသနျ့ကို ပွောပွတာပါ ။အဓိက အထကျကပွောခဲ့တဲ့ အတိုငျး စိတျရှညျရှညျနဲ့ ဆေးကိုပုံမှနျသောကျပေးဖို့ ထပျပွောပါရစနေျော … …
ဆေးနညျးကိုပွောပွပေးသော အမ ရှခွေံသူ မအိမျကံ ကိုကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျခငျဗြာ …